November | 2017 | Radio Himilo | Page 9
radio himilo November 6, 2017	Features, Wararka Leave a comment 49 Views
radio himilo November 6, 2017	Features, Wararka Leave a comment 43 Views
Muqdisho – Markii ugu horreysay waxaa Xarunta Kaalmo-sharciyeedka Jaamacadda Muqdisho lagu qabtay tabbabar loo bixiyay Maxkamadda Mala-awaalka oo ardaydu si ficliyaysan loogu iftiiminayay sida lagu dhaqan-gelin karo aragtiyada iyo nadariyaadka loogu dhigo kulliyadaha Sharciga iyo qaanuunka. Ardayda kulliyadan oo ka ...
Hooyo 98-jir ah oo wiilkeeda oo 80-jir ah daryeelaysa!
radio himilo November 5, 2017	Features, Wararka Leave a comment 41 Views
Muqdisho – Ada Keating, oo hooyo 98-jir ah oo dhashay afar carruur ah ayaa usoo wareegtay xarun karantiil oo lagu xanaaneeyo oo ku taalla Huyton, degmada Liverpool, si ay u daryeesho cunugeeda oo 80-jir ah. Tom ayaa hoyga Moss View kusoo noqday sanadkii ...
radio himilo November 4, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 28 Views
Muqdisho – Weeraryahanka kooxda Chelsea, Alvaro Morata ayaa sheegay in tababbaraha Manchester United, Jose Mourinho uu haatan yahay shaqsi uu la tartamayo – xilli labada kooxood ay isku diyaarinayaan kulanka Axadda. Morata ayaa kulankiisii ​​ugu horreeyey oo uu saftay waxaa ...
Aaron Ramsey: “Arsenal way soo kabsanaysaa.”
radio himilo November 4, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 30 Views
Muqdisho – Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal, Aaron Ramsey ayaa sheegay in kooxdiisa ay soo kabsatay kadib markii ay ku billaabatay xilli ciyaareedkan qaab liita iyo natiijooyin aan wanaagsaneyn. Gunners-ka ayaa soo gabagabeysay bishii August iyada oo guuldarro ay ka ...
radio himilo November 4, 2017	Features, Wararka Leave a comment 48 Views
Muqdisho – 11-kii sano ee lasoo dhaafay, tiro dhan 930 wariyayaal ah ayaa loo dilay soo tebinta warar iyo warbixinno bulshadoodu u baahan tahay. Celcelis ahaan, tani waxay isku ururinaysaa 1 dhimasho afartii maalmoodba. 90% dilalka wariyaasha loo geysto ma ...
Arday labada gacmood – mar qura – wax ku wada qori kara.
radio himilo November 1, 2017	Features, Wararka Leave a comment 68 Views
Muqdisho – Iskuul ku yaalla xaafadaha fog ee dalka Hindiya ayaa dareenka warbaahinta kusoo jiitay markii 300 oo ardaydiisa kamid ah la ogaaday inay leeyihiin awoodda ay labada gacmood – mar qura – wax loogu qori karo. Warbixin ayaa lagu ...
Silva oo heshiis cusub doonaya inuu kooxdiisa la galo.
radio himilo November 1, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 37 Views
Muqdisho – David Silva wuxuu doonayaa heshiis cusub la galo kooxdiisa Manchester City iyo jawaab loo hayo ducadiisa horyaalka UCL. Silva ayaa sanadkii 2011 wuxuu Valencia kaga soo biiray kooxda Etihad ku ciyaarta, wuxuuna la sameeyey guulo ay kamid yihiin hanashada ...
Arsenal oo doonisteeda Lemar cusboonaysiinaysa.
radio himilo November 1, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 49 Views
Muqdisho – Arsenal ayaa u jihaysanaysa cusboonaysiinta heshiiska ay kusoo xera-gelin karto laacibka Thomas Lemar oo kooxda Monaco u ciyaara xagaaga soo aadan, marka loo eego Jariiradda The Mirror. Kooxda lagu naaneyso Gunners-ka ayaa bishii August ku fashilantay inay adduun dhan £90 ...
Daafacii ugu horreeyey PSG oo saddexley dhaliya.
radio himilo November 1, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 39 Views
Muqdisho – Layvin Kurzawa waxay xalay u ahayd habeen gooni ah markii kooxdiisu ay wajahday Anderlecht tartan katirsanaa horyaalka UCL. Daafacani wuxuu dhaliyay saddex kamid ah goolasha kooxdu 5-0 kaga adkaatay dhigeeda marti ahaan kaga timid dalka Biljamka. Tani waxay ahayd markii ...